KOOXDA USBUUCA: Shaxdii Toddobaadkan Ugu Wanaagsanayd Premier League Oo Lasoo Saaray & Koox Afar Xiddig Ku Qabsatay - Gool24.Net
KOOXDA USBUUCA: Shaxdii Toddobaadkan Ugu Wanaagsanayd Premier League Oo Lasoo Saaray & Koox Afar Xiddig Ku Qabsatay
July 7, 2020 Mahamoud Batalaale
Shabakadda caanka ku ah xogaha kala duwan ee kubadda cagta ee WhoScored ayaa sidii caadiga ahayd soo xulatay shaxdeedii ugu wanaagsanayd horyaalka Premier League kulamadii la ciyaaray Sabtidii ilaa xalay oo Isniin ahayd.
Shaxdan ayay xiddigaha ugu badan ku yeelatay kooxda Manchester United oo 5-2 kaga soo adkaatay dhigeeda Bournemouth kulan ay afar ciyaaryahan oo kala duwan oo dhammaantood shaxdan kusoo baxay shabaqa tageen.
Aan ku bilawnee goolhayaha shaxdan ayaa ah McCarthy oo ahaa geesigii saddexda dhibcood Southampton uga xaqiijiyay Man City oo ay 1-0 ku garaaceen isaga oo fursado aad u badan ka badbaadiyay Sky Blues.
Labada daafac dhexe ee shaxdan ayaa ah James Tarkowski oo gool usoo dhaliyay Burnley kulankii ay bar-bardhaca la gashay Sheffield United waxaana la midaysan Justin oo daafac midig uga ciyaarayay Leicester balse daafac dhexe ahaan ugu soo baxay.
Daafaca midig ee shaxdan ayaa ah Walker-Peters oo Southampton muhiim uga ahaa guushii City halka uu daafaca bidix yahay kabtanka Chelsea ee Azpilicueta oo Ross Barkley ka caawiyay gool kulankii ay Blues 3-0 ku jiidheen Watford.
Labada khad dhexe ee shaxdan ayaa ah Bruno Fernandes oo halkiisa kasii wada wacdaraha uu ku dhigayo Man United isla markaana kaba caawimo iyo gool soo sameeyay kulankii Bournemouth iyo Barjley oo caawin iyo gool kusoo kala dhantaalay Watford.
Khadadka dhexe ee garbaha ee shaxdan ayay kusoo baxeen Mason Greenwood oo laba gool oo cajiib ah kasoo dhaliyay Bournemouth iyo Rashford oo gool kulaad soo dhaliyay.
Ugu dambayn, labada weeraryahan ee shaxdan kusoo baxay ayaa kala ah Anthony Martial oo gool qurux badan kasoo dhaliyay Bournemouth iyo Jamie Vardy oo laba gool oo wareer ah la gaadhay shabaqa Crystal Palace isla markaana goolkiisii 100-aad iyo 101-aad ee Premier League soo dhaliyay.
Abdiaziz Abdullahi says:
Yac wax kajiro malahaan waxan. Arsenal wexeey
Awey kaga badisey Wolves oo koox aad u’adag ab
Marka shaxdan kuwii dahay waa shaxdii isbuuca been
Ayeey ku sheegeen